ICCITA MILKAA’INAA ‘BARAAK OBAAMAAFI HAADHA MANAASAA MICHELLEE’rraa maal barannaa?- ICCITA MILKAA’INA DHALA NAMAARRA – Beekan Guluma Erena
ICCITA MILKAA’INAA ‘BARAAK OBAAMAAFI HAADHA MANAASAA MICHELLEE’rraa maal barannaa?- ICCITA MILKAA’INA DHALA NAMAARRA	Beekan Erena
Books, Language Category, Seenaa January 12, 2017HAADHA MANAAFI ABBAA MANAA
ICCITA MILKAA’INAA ‘BARAAK OBAAMAAFI HAADHA MANAASAA MICHELLEE’rraa maal barannaa?- ICCITA MILKAA’INA DHALA NAMAARRA
Michellen, Barak Obama tiin akkasumatti lafa duwwaa ykn otuu inni waa hin qabaatiin isa barte ykn jaallatte. Garuu, har’a lachuun isaanii addunyaa kana irratti haadha manaa fi abbaa manaa ciccimoodha. Waggaa 25 guutuu isa waliin dhaabattee isa gargaartee, isa suphitee, isa qartee mul’ata isaa biraan waan isa geesseef, kunoo har’a ishee jajata; ishee galateeffata. Namoonni har’a Addunyaa kana irratti ciccimoo ta’an, dur yeroo wal fuudhaan sana haati manaa koo ykn abbaan manaa koo akka har’a kana nama cimaa ykn cimtuu ta’a/ taati jedhanii hin beekan turan. Garuu, jaalala dhugaa irrati hundaa’anii gaa’ela godhachuun, jabaatanii wal duukaa hojjechuun kunoo har’a addunyaa irratti beekaman. Gargaarsi, gorsi, obsi, kabajni, hubannaan, aarsaan fi jaalalli gam lachuu irraa gaafa ta’u jaalalli isaan gidduu jiru ni miyaawa; akkasumas wal guddisuuf isaan gargaara.
Ergaan koo: dhaloonni har’aa kun xiqqoo adda dha. Shamarran tokko tokko nama mana qabu, nama konkolaataa qabu, nama qarshii baayyee ‘acount’ isaa keessaa qabu tti borsaa isaanii qabatanii dhaqanii itti galanii jireenya jalqabuu barbaadu. Akkasumas, dhirri tokko tokko dubara hojii gaarii fi kaffaltii gaarii qabdu, dubara of dandeesse, kan mana mataa ishee fi konkolaataa qabdu fuudhuu barbaadu.
Hawwaasa akkamii keessa jiraachaa jirra? Waliin jabaatanii hojjechuun eessa dhaqe? Haati manaa fi abbaan manaa Wal gargaaranii gara mul’ata fi abjuu ofiitti wal guddisuun eessa dhaqe? Namni kan wal fuudhu: wal qaruuf, wal gargaaruuf, wal geggeessuu fi waliin guddachuuf malee callisanii waliin taa’uuf miti.
Mee hundi keenya waan alaa mul’atu irratti osoo hin taane, waan keessa namaa jiru irratti haa xiyyeefannu! Kaleessi har’a miti; har’i imoo bor miti. Waan alaa mul’atu akka fixeensa ganamaati. Galatoomaa!
← KUUSH ILAALCHISEE AKEEKA WAAQAYYOO KEESSAAN WALITTI HIDHATA SABA KUUSH fi UUMMATA OROMOO-Luba Malkaamuu Jaatee’TIIN
DUBBII QOLAA (Sookoofi Soorgoo)-Beekan Gulummaa Irranaa-AMAJJII 12 bara 2017 →